မိုးယုရေ .. ခိုင်လေးကတော့ MYMC Online Radio က Amedeo ပါ။ ပထမဆုံး မိုးယုရဲ့နာမည်အရင်းနဲ့ မွေးနေ့လေးကို ပရိတ်သတ်ကြီး သိအောင်ပြောပြပေးပါရှင်။ဟုတ် .. မိုးယုနာမည်က ဒါ.. မိုးယုနာမည်အရင်းပါပဲ “မိုးယုစံ” ဆိုတာ။ မွေးနေ့သက္ကရာဇ်က ၁၁ ရက် ၇ လ ၁၉၉၁ ပါ။ ဟုတ်ကဲ့။ နောက်ပြီးတော့ အခု မိုးယု ဒီအနုပညာလောကထဲကို စတင်ဝင်ရောက်လာပုံလေးကိုလည်း ပရိတ်သတ်ကြီးသိအောင် ပြောပြပေးပါဦး။အနုပညာလောကထဲတော့
Miss ပြိုင်ပွဲတွေ.. ပြိုင်ပွဲတွေပြိုင်ပြီးတော့ ဝင်လာတာပါ။ ပြိုင်ပွဲပြိုင်ပြီးတော့ ကြော်ငြာရိုက်တယ်။ ပြီးမှ ကားရိုက်ပြီးတော့ဝင်လာတာပါ။ ဟုတ်..
မိုးယုက ငယ်ငယ်လေးထဲက ဒီအနုပညာအလုပ်ကို စိတ်ဝင်စားတာလား၊ နောက်ပြီးတော့ ငယ်ငယ်နဲ့ ဒီအနုပညာလောကထဲကို ရောက်လာတာဆိုတော့ ဆယ်ကျော်သက်ဘဝကိုရော စိတ်ကြိုက်ဖြတ်သန်းခဲ့ရရဲ့လား။ငယ်ငယ်လေးတည်းက
ဝါသနာပါတာပါ။ ငယ်ငယ်လေးထဲက လုပ်ချင်ခဲ့တာပါ။ အင်း.. ဒါပေမယ့်ပိုသိလာတာကတော့ ၉တန်း ၁၀တန်းလောက်မှ ဒီအလုပ်လုပ်ချင်တယ်ဆိုတာ ပိုသိလာတယ်။ ၁၀တန်းပြီးတော့လည်း မမျှော်လင့်ဘဲ လုပ်ဖြစ်သွားတယ်။ ပြိုင်ပွဲတွေပြိုင်ပြီး မမျှော်လင့်ဘဲ ဝင်ဖြစ်သွားတယ်။ ဒီအနုပညာလောကထဲရောက်လာတယ်။ အဲဒီအတွက်.. အင်း.. ကျေနပ်တယ်။ နောက်ပြီးတော့ ဆယ်ကျော်သက်ဘဝကို .. (ရယ်လျက်) ဆယ်ကျော်သက်ဘဝကို ဘယ်လိုမှန်းတောင် မိုးယုမသိပါဘူး။ မိုးယုအတွက်က လူငယ်ဆိုပေမယ့် လူငယ်လို တစ်ခါမှမနေခဲ့ရပါဘူး။ ဟုတ်ကဲ့။ နောက်.. အဲဒါဆိုရင် အနုပညာအလုပ်တွေနဲ့ရှုပ်နေတာဆိုတော့ ပညာရေးဘက်မှာရော ဘာတွေတက်နေလဲ။ ပညာရေးဘက်မှာတော့ ဒုတိယနှစ် အဝေးသင် မြန်မာစာတက်နေတယ် အစ်မ။ ဟုတ်ကဲ့။
အခုဆိုရင် မိုးယုက ရုပ်ရှင်လည်း တော်တော်များများရိုက်ပြီးပြီပေါ့နော်။ အဲ့ဒီထဲက အမှတ်တရဖြစ်စေတဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းအဖြစ်အပျက်တစ်ခုရှိခဲ့ရင် ပရိတ်သတ်ကြီးသိအောင် ပြောပြပေးပါဦး။ အမှတ်တရအနေနဲ့တော့
ဒီ.. စင်္ကာပူမှာ အခုလာရိုက်တဲ့ကားလေးက အမှတ်တရပါပဲ။ ဘာလို့ဆိုတော့ ပြည်ပထွက်ရိုက်တာလည်း ပထမဦးဆုံးပဲလေ။ နောက်ပြီးတော့ ဒီလို.... ဒီကားမှာဆိုရင် အဓိကသရုပ်ဆောင်အနေနဲ့ ကိုနေတိုးနဲ့ မိုးယု နှစ်ယောက်တွဲဖြစ်သွားတယ်လေ။ အဲ့ဒီအတွက် ဒီကားလေးက အမှတ်တရအဖြစ်ဆုံးပါ။ဟုတ်။
နောက်ပြီးတော့ မိုးယုက အခုသရုပ်ဆောင်ဘက်ရော၊ Model ဘက်ရောပေါ့နော် နောက်..
သီချင်းတွေလည်းဆိုလာပြီဆိုတော့ ဘယ်အပိုင်းကို ပိုပြီးအားသန်လဲ၊ လုပ်ရတာ ပိုပြီးစိတ်ပါလဲ။ အားလုံးက အနုပညာပဲဆိုတော့ အားလုံးဝါသနာပါတယ်။ အကုန်လုံးကိုတော့ .. တကယ်လို့ ရှိုးလျှောက်လည်း ရှိုးလျှောက်တဲ့အလျောက် အကောင်းဆုံးလုပ်ပါတယ်။ ဒီသရုပ်ဆောင်တဲ့အပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း သရုပ်ဆောင်တဲ့အပိုင်း ပီပြင်အောင် ကိုယ်လည်း အတတ်နိုင်ဆုံးသရုပ်ဆောင်တယ်။ သီချင်းပိုင်းကကျတော့ ဝါသနာပါလို့ဆိုဖြစ်တာပါ။ အသံကောင်းလို့တော့ မဟုတ်ပါဘူး။မိုးယုအတွက် စံပြသရုပ်ဆောင် ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် လေးစားအတုယူရတဲ့ အနုပညာရှင်တွေရော ရှိလားမသိဘူး။အင်း..
ကိုယ့်ထက်ဝါရင့်ရင် သရုပ်ဆောင်ရာမှာတော့ အနုပညာပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ သရုပ်ဆောင်တဲ့အပိုင်းမှာ အကုန်ကောင်းကြတယ်လေ။ အဲ့ဒီအတွက် သူတို့ကိုတော့ နမူနာယူပါတယ်။ သူတို့ကိုအားကျမိတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ အခု မိုးယုက အနုပညာအလုပ်တွေလုပ်နေတာကို မိုးယုရဲ့မိသားစုကရော ဘယ်လောက်ထိ အားပေးပါလဲ။ ဒီ
အနုပညာအလုပ်လုပ်တော့ အမေနဲ့အဖေပေါ့နော် အမေနဲ့အဖေကတော့ အရမ်းအားပေးတယ်။ အရင်တုန်းကထင်တာက အဲ့လောက်အားမပေးဘူးထင်ထားတာ။ ဒါပေမယ့် အမေနဲ့အဖေက ပိုပြီးတော့တောင် သမီးထက် ပိုပြီးဝါသနာပါတယ်လို့ထင်ရတယ်။ပိုပြီးအားရှိတာပေါ့။
ဟုတ်ကဲ့ ... အခုမိုးယု အနုပညာလောကထဲကို စရောက်ချင်းတုန်းကပေါ့ ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေနဲ့ ကြုံတွေ့ခဲ့ရလဲဆိုတာကိုရော ပြောပြပေးပါ။အင်း..
အခက်အခဲအနေနဲ့တော့ သိပ်အကြုံကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်လည်း အနုပညာအလုပ်ဆိုတာ လူပေါင်းစုံ၊ စိတ်ပေါင်းစုံနဲ့ ဆက်ဆံရတဲ့အခါကျရင်တော့ တခါတလေတော့ အခက်အခဲလေးတွေရှိပါတယ်။ နောက်ပြီး မိုးယုအတွက်က မိုးယုဘာသာမိုးယု.. မိုးယုရဲ့ပင်ကိုစိတ်က အေးအေးနေတတ်တယ်။ အဲဒီအတွက် ဒီအလုပ်လုပ်တဲ့အခါကျရင် နည်းနည်း ဝင်ခါစက အခက်အခဲလေးတွေရှိတယ်။ ဟုတ်။ အခု စင်္ကာပူမှာ ရုပ်ရှင်လာရိုက်တာက ပထမဆုံးအကြိမ်ပေါ့နော်။ ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်။ နောက်.. အဲဒါဆိုရင် ဒီ.. မိုးယုရဲ့ အတွေ့အကြုံခံစားချက်လေးကရော ဘယ်လိုများဖြစ်မလဲ။အင်း..
ပြည်ပထွက်ရိုက်တာ ဒါ ပထမဦးဆုံး။ ပြည်တွင်းမှာတောင်မှ နယ်တွေဘာတွေ သိပ်မထွက်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်။ သိပ်ထွက်ပြီးတော့ သိပ်မရိုက်ဘူး။ မရိုက်ဖူးဘူး။ အခုလို ပြည်ပထွက်ရိုက်တဲ့ အခါကျတော့ ဟို.. အတွေ့အကြုံသစ်လည်းရတယ်၊ နောက်ပြီး ဒီကားလေးကိုကြည့်တဲ့ ပရိတ်သတ်အနေနဲ့လည်း အမြင်ဆန်းလေးတွေဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်။ဟုတ်။ အခု.. သရုပ်ဆောင်နေတဲ့ဇာတ်လမ်းမှာပေါ့ မိုးယုက ဘယ်လိုဇာတ်ရုပ်မျိုးနဲ့သရုပ်ဆောင်ထားတာလဲ။ အင်း..
ဒီကားကတော့ အချစ်ကားလေးပါပဲ။ အချစ်ကားလေး။ ဒီမှာကျတော့ ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ ဦးနှောက်.. ဦးနှောက်ကင်ဆာရှိတယ်။ ကင်ဆာရှိတယ်။ သေတော့မယ့်လူပေါ့နော်။ သေတော့မယ့်လူနှစ်ယောက်ရဲ့ ခံစားချက်မတူဘူး။ အဲ့နှစ်ယောက်တွေ့ပြီးတော့ အဲ့နှစ်ယောက်ရဲ့ခံစားချက်.. အချစ်ဆိုတဲ့ ခံစားချက်လေး ဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့မှ သေခြင်းတရားကို ရင်ဆိုင်ရတဲ့ဟာမျိုးလေး။ ဒီမှာက ထူးထူးခြားခြားအနေနဲ့တော့ မျက်စိမမြင်တဲ့ပုံစံနဲ့ နောက်ပိုင်းသရုပ်ဆောင်ရတယ်။ ဇာတ်တဝက်မှာပေါ့။ဟုတ်။
အခုလို အချိန်တိုတိုလေးအတွင်းမှာပေါ့ “မိုးယုစံ” ဆိုတဲ့နာမည်က အနုပညာလောကထဲမှာ တော်တော်နေရာရလာခဲ့တယ်ပေါ့။ အဲ့လိုနေရာရလာအောင် ဘယ်လောက်ထိ
ကြိုးစားခဲ့ရတယ်ဆိုတာ ပြောပြပေးပါရှင်။အဓိကကတော့ မိုးယု ကံပါလို့လည်းဖြစ်လာတာလေ။ ကံပါတယ် နောက်ပြီးတော့ ကံ၊ စန်းပါတယ်.. နောက်ပြီးတော့ ကြိုးစားမှုလည်း ပါမယ်ထင်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့
အနုပညာသမားတစ်ယောက်ဆိုတော့ ကောလဟာလတွေနဲ့ အနည်းနဲ့အများတော့ကြုံရတာပေါ့။ အဲ့လိုမျိုးကြုံရတဲ့အခါမှာ မိုးယုဘယ်လိုဖြေရှင်းလဲ၊ ဘယ်လိုခံစားရလဲ။ဘယ်လိုမှမဖြေရှင်းပါဘူး။
ဒါကလည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံတယ်လေ။ ကိုယ်လည်းဘာမှမလုပ်ဘူး။ အဲ့ဒီအတွက် ဘာမှကိုမဖြေရှင်းပါဘူး။ ခုနပြောသလိုပေါ့ အင်း.. လူတွေက စိတ်အမျိုးမျိုးနဲ့ဆိုတော့ ပြောချင်တာ ပြောနေကြတာပဲလေ။ တခါတလေ တစ်နေ့တည်းနဲ့ သတင်းပေါင်းစုံကြားနေရတာပဲ။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်မဟုတ်ဘူး၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံတယ်။ ကိုယ့်နည်းတူ ကိုယ့်ကိုယုံကြည်တဲ့ လူတွေလည်း အများကြီးရှိတယ်။ အဲ့ဒီအတွက် ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ဟုတ်။
ကြော်ငြာတွေ ဇာတ်လမ်းတွေထဲမှာ မိုးယုရဲ့ ဝတ်ပုံစားပုံဒီဇိုင်းက ရိုးရှင်းပြီးတော့ အရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းတယ်လို့ အားလုံးကပြောကြတယ်ပေါ့နော်။ အဲ့တော့ ဒီအဝတ်အစားဒီဇိုင်းတွေကို Designerနဲ့ တိုင်ပင်ပြီးတော့ ဝတ်တာလား၊ ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ပဲ စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ပြီးတော့ဝတ်တာလား။ မိုးယုတို့ဆီမှာ
Designerနဲ့ ချုပ်တာများတယ်။ မိုးယုက Designerနဲ့ ချုပ်တာများတယ်ပေါ့။ ဘာလုိ့ဆိုတော့ ကြော်ငြာဟာတွေဆိုလို့ရှိရင် ပိုင်ရှင်စိတ်ကြိုက် အရောင်ရွေးပေးရတယ်။ အဲ့အတွက် အပြင်ကအင်္ကျီတွေဝယ်ဖို့က အဆင်မပြေဘူး။ အဲ့အတွက် Designer အပ်တာများတယ်။ တချို့ကားရိုက်တာတွေကျတော့ အခန်းစဉ်.. scenes တွေကလည်းများတယ်လေ။ scenes တွေများတဲ့အခါကျရင်တော့ အပြင်ကအဝတ်အစားတွေဝယ်တယ်။ အဲ့ကျရင်တော့ အမေပဲစီစဉ်တာပါ။ အဓိကကတော့ မိုးယုတို့ဆီမှာ censor ရှိတယ်။ အဲ့ဒီအတွက် censor လွတ်ပြီးတော့ ကိုယ်နဲ့အဆင်ပြေမယ့်ဟာလေးပေါ့နော်။ ကိုယ်ဝတ်တဲ့ဟာက ဟို.. ဒီဘက်ကလူတွေအနေနဲ့ကြည့်ရင် date out ချင်လည်း out နေမယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ကိုယ်နဲ့လိုက်ဖက်ဖို့က အဓိကပဲလေ။ ဟုတ်ကဲ့။ အဲဒါဆိုရင် အခု မိုးယုက ဒီအချိန်မှာ အနုပညာရှင်တစ်ယောက် ဖြစ်မနေဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ .. အခု ဘာတွေလုပ်မယ်လို့ထင်လဲ။ အနုပညာရှင်ဖြစ်မနေဘူးဆိုရင် ကျောင်းပဲတက်ဖြစ်မှာပါ။ ဟုတ်။
အခု မိုးယုရောက်နေတဲ့နေရာပေါ့၊ မိုးယု ရနေတဲ့နာမည်တစ်လုံးကိုပေါ့ မိုးယုကျေနပ်ပြီလား။ နောက်ထပ်ရော ဘာတွေထပ်လုပ်ဖို့ မိုးယုစိတ်ကူးထားသေးလဲ။ အတိုင်းအတာတစ်ခုထိတော့
ကိုယ်ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ အချိန်လေးအတွင်းမှာ ချက်ချင်းကြီး ပရိတ်သတ်ကအားပေးခဲ့တဲ့အတွက် ပရိတ်သတ်အားပေးမှုကို ကျေနပ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း
ဒီ့ထက်မက ပရိတ်သတ်ချစ်ခင်တာ၊ ပရိတ်သတ်အားပေးတာမျိုး၊ ဒီ့ထက်မက အလုပ်တွေလည်းပိုလုပ်ချင်သေးတယ်။ အဲ့ဒီအတွက် ပရိတ်သတ်ကြီးရဲ့ အားပေးမှုက အရမ်းလိုအပ်ပါတယ်။ မိုးယုကို အားပေးပါလို့။ ဟုတ်ကဲ့။ နောက် အခု မိုးယုက အနုပညာအလုပ်တွေ ကျောင်းကိစ္စတွေနဲ့ရှုပ်နေတာဆိုတော့ ချစ်သူရောရှိပြီလား။ချစ်သူက မရှိပါဘူး။ ဟုတ်။ အဲ့လိုဆိုရင် ဘယ်လိုမျိုးလူကိုရော အဲ့လို ရွေးချယ်မယ်လို့စိတ်ကူးထားလဲ၊ ဘဝလက်တွဲဖော်အဖြစ်ပေါ့။အင်း.. စိတ်ကူးက အဝေးကြီးလိုသေးတော့ မသိဘူးအစ်မ (ရယ်လျက်)ဟုတ်ကဲ့။
အခုက Internet တွေ၊ Email တွေ ခေတ်စားနေတာဆိုတော့ မိုးယုမှာရော ဆက်သွယ်လို့ရမယ့် Email ၊ Facebook ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် Personal Website တွေရောရှိလား။ ရှိရင်လည်း မိုးယုကိုချစ်တဲ့ပရိတ်သတ်ကြီးကို ပြောပြပေးပါဦး။
အဲ့ဒါဆိုရင် အနုပညာရှင်တွေနဲ့ ပရိတ်သတ်တွေ Online ကနေပြီးတော့ ဆက်သွယ်ပေးနေတဲ့ Myanmar Youth Media Club (MYMC)လိုမျိုး Online Media တွေကိုရော မိုးယုအနေနဲ့ ဘယ်လိုမြင်လဲ စိတ်ထဲမှာ။အင်း..
ဒီလို Media တွေကတော့ မိုးယုတို့အနုပညာသမားနဲ့ ပရိတ်သတ်တွေကြားထဲမှာ အရမ်းလိုအပ်ပါတယ်။ Media တွေမရှိလို့ရှိရင်လည်း ကိုယ်ဘယ်လောက်ပဲလုပ်လုပ် ဘာတွေပဲလုပ်နေလုပ်နေ ပရိတ်သတ်သိမှာမဟုတ်ဘူး။ မသိတဲ့အတွက် အားပေးလို့ရမှာလည်းမဟုတ်ဘူးလေ။ အားမပေးလို့ရှိရင် ကိုယ့်ရဲ့အနုပညာတင်ပြမှုတွေကို သိမှာလည်းမဟုတ်ဘူး၊ ကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကလည်း တက်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ အဲ့ဒီအတွက် ဒီ Mediaတွေက အရမ်းကိုလိုအပ်တယ်၊ အရမ်းကို အရေးကြီးတယ်ထင်ပါတယ်။ အခုဆို မိုးယုတို့ဆိုလို့ရှိရင် Internet ၊ Email တွေဘာတွေမရှိဘူး။ မရှိဘူးဆိုတာလည်း ပရိတ်သတ်ကြီးကို အဆက်အသွယ်ဖြတ်ထားတာမဟုတ်ပါဘူး။ မိုးယုက မသုံးဖြစ်တာ၊ မသုံးဘူးပေါ့နော်။ အဲ့ဒီအတွက် .. ဒါပေမယ့်လည်း မိုးယုကို ရန်ကုန်မှာဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်။ ဟုတ်။ အဲ့ဒါဆိုရင်.. နောက်ဆုံးပေါ့နော်.. မိုးယုအနေနဲ့ မိုးယုကိုချစ်တဲ့ ပရိတ်သတ်ကြီးအတွက် ဘာများပြောချင်ပါလဲ။အင်း..
မိုးယုကို အားပေးတယ်၊ မိုးယုကို ချစ်ခင်တဲ့ ပရိတ်သတ်ကြီးကို မိုးယုက အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့၊ ဒီထက်မက အားပေးပါလို့၊ စောစောကပြောသလိုပဲလေ အနုပညာသမားတွေက ပရိတ်သတ်အားပေးမှ အလုပ်တွေအများကြီးလုပ်ရမယ်၊ ဒီထက်မက နာမည်တွေအများကြီးရလာမယ်။ အဲ့ဒီအတွက် ပရိတ်သတ်က အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ဟုတ်။ အခုလိုမျိုး မေးခွန်းတွေ ဖြေကြားပေးတဲ့အတွက် မိုးယုကို MYMC ကိုယ်စား ခိုင်လေးက ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်..
မိုးယုကလည်း အစ်မတို့ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အခုလိုမျိုး မိုးယု စင်္ကာပူမှာလာရိုက်တုန်း ပရိတ်သတ်တွေနဲ့... ပရိတ်သတ်ကြီးကို မိုးယုရဲ့ အနုပညာတင်ဆက်မှုတွေ၊ မိုးယု ခံစားချက်တွေ ပြောခွင့်ရအောင်စီစဉ်ပေးတဲ့ အစ်မတို့ကို အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ပရိတ်သတ်ကြီးကိုလည်း မိုးယု အမြဲတမ်းကျေးဇူးတင်နေပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့။ ကျေးဇူးပါပဲနော်။ ဟုတ်။ Posted by
Photos: Nann Su Yati Soe's First Solo Album Promot...
ံHot Shower Video
2010 ပုဂံအမှတ်တရလေးပါမေးလ်ထဲရောက်လာတာပါ။ ၂...
BRITNEY SPERS VIDEO
Model Myat Moht Moht Theint in Floral Mini DressMy...
NOVEL KYAW KYAW
Glasses Honor Student Attend in Semen – Mika Ohsaw...
စု ခါး ရီ
Hot Together #16
Click Here To Start DownloadPassw...
Step Daughter Anal Raped ...
Taiwan Mom Fucks in Hotel
Couple Fashions: Beauty and Bridal Fair 2011 @ Iny...
Photos: Beauty & Bridal Fair 2011 @ Inya Lake Hote...
Love Semen - Anri Hoshizaki
Click Here To Start Do...
Favourite Beauty Sex Contact System - Erina Shiras...
Semen Bazooka - Mayu Nozomi
Iron Cross: IC Show @ Myaw Sin Gyun Park, YangonHe...
[Soft on Demand] Hot Girl in Mens Spa ( ...
[Alice] Drunk Elder Sister ( Akari Asahi...
Incest Familly Japan Vol.439
Click Here To Start D...
Silent Sex Service Girls at Workplace – Satomi Suz...
[ADVR-0545] Mari Yoneyama – Bizarre Cage No.69
[MIGD-363] Anri Hoshizaki – Bukkake Nakadashi Anal...
Mobile XXX Videos Collection2- 10 Videos
Tora-Tora Gold Vol 1 (Rina Himekawa)
Runa Sesaki - Remix
Click Here To Start DownloadPa...
Korean Famous Actors: Choi Soo Jong and So Yi Hyun...
Yuri Kousaka - MIKADO Vol.8 Custom
Sena Aragaki - Red Hot Jam Vol.159 Disc 2
Yui Matsuno - Pink Pucher Vol. 113
သဘာဝ အလှလေးများမေးလ်ထဲရောက်လာပါ၏။ @drchatg...
Egals Vol.6 – Rika Aina
Click Here To Start Downlo...
Natsuki Iijima, Runa Sezaki - Red Hot Jam Vol.27 -...
Tora-Tora Gold Vol 1 (Rina Himekawa)11:16 PM / Com...
Tuấn Anh vs Quỳnh Nga
Vừa phịch xong 1 em
Clip SV DHTD Oncam khoe hàng
Em vú to Dâm
Click Here To Start DownloadPassword ...
Gái Việt Còn Trinh
Click Here To Start DownloadPas...
Sinh Viên Hà Nam
Đụ nhau trong phòng trọ
Click Here To Start DownloadPasswo...
Một Em VN Cực Dâm Ra Nước Quá Trời
Em Mai Lan Ở Thủ Đức Chat Sex
Thác loạn girl teen SG, 1vs3!
Nhân viên bảo vệ phịch trong Canteen
Đầu xuân chơi gái Zin
Chat SexPart 1 -2- 3
Password unlock: lauxanh.us...
Zemani - Marta
Click Here To Start DownloadPasswor...
Busty Girl Homemade Sex
Allison Angel - Alisons Nightmare
Click Here To St...
Teen Kasia - Fishnet thigh highsClick Here To Star...
Teen Kasia - One with the Trees
Click Here To Star...
Gái Việt tập tành "Thẩm Du"
Em Thi Q1 Chat Voice & WC sexClick Here To Start D...
Phang tập thể một con cave
Click Here To Start Dow...
Ô Môi Show CamClick Here To Start DownloadPassword...
Em Teen Show CamClick Here To Start DownloadPasswo...
Em Thảo Bình Dương Show Cam
Gọi đt rủ bạn trai đến nhà để Click Here To Start ...
Chơi Vợ Thằng Bạn
Click Here To Start DownloadPass...
Myanmar Pretty Model Girl: Poe Thinzar MaungMyanma...
Dân Chơi Hà NộiClick Here To Start DownloadPasswor...
Đôi tình nhân đi nhà nghỉ
Click Here To Start Down...
1 em thổi kèn điệu nghệ
Record Việt couple chơi trên paltalk
Em Thu Hương NV tiếp thị Beer Tiger (1m62 83-60-88...
Chơi xuyên quần
Nghệ Thuật Thổi KènClick Here To Start DownloadPas...
Có thằng chồng khỏe quá cũng khổ
Click Here To Sta...
Quay lén em hàng xóm thay đồClick Here To Start Do...
Cho Em Ngủ Say Để Anh Làm Việc
Quay Lén Cặp Phang Nhau Trong WC
Trải chiếu xuống sàn và chiến đấu
Incest Familly Japan Vol.483
[EZD-283] Yuna Mano - Loss of Interest 2
[EZD-279] Anna Mitsui, Kanna Harumi, Aya Inami, Yu...
[SOE-271] Reon Otowa - GAL Slut Woman
[BBI-066] Sana - Teacher of Health
[SOE270] Sakura Cocomi - Pervert Young Wife Next D...
Reina Yuki - Cleaning Fellatio Lover High School ...
[XV-980] Nana Ogura Active Sports School Gir...
[ZONO-041] Rio Hamasaki Outdoor Exposure Sex...
ပုလွေ မမ ကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးမှုပါ ။@Eric Nalthan ...
Rei Mizuna - President Daughter Sadness. Imprisone...
Reina Yuki - Cleaning Fellatio Lover High School G...
စိတ်ဝင်စားစရာ Topic လေးအချစ်တက္ကသိုလ်က ကျော...
Anak2 Nakal Jaman Sekarang
vzo chat video
ယောင်္ကျားများရဲ့ဦးနှောက်ပုံ တဲ့ယောက်ကျားတို့ရဲ့ ...
Pyay Ti Oo, Eaindra Kyaw Zin and Their Lovely Firs...
MODEL STRIKE BACK
@myanmar beer s...
Kegel exercises for Men ယောက်ျားများ စိတ်ဝ...
BURMA GOOD GIRLFRIENDS
စားဘဲကြီး ခန့် စည်သူဒီဘဲကြီးက တယ်လဲ အပြင်မှာတွဲနေပ...
Caribbean Diamond Vol.1 – Karera Ariki
မိုးယံကြားက တိမ်နဂါး (ဇာတ်သိမ်း)
ရှက်တယ်တဲ့ Mail ထဲပို့ လာတာပါ။ရှက်တယ်ဆိုဘဲမျက်...
Photos: Ga Mone Pwint's Prince and Princess 2011 B...
Photos: Ga Mone Pwint's Prince and Princess Award ...
Photos: The Riverine Cruise Couple Wedding Fair 20...
Myanmar Wedding Fashion: Riverine Cruise Couple We...
နောက်ဆက်တွဲပေါ့စိတ်မရှည်လို့ ထပ်ပို့ လိုက်တယ်ဗျို ...
ထင်တိုင်းကြဲနေတာ တဲ့ ကိုချက်ကြီး ဒါတေ...
Myanmar Hot New Face Model Girl May Wa Thone KyawM...
Wutt Hmone Vs Shwe Sin: Who'd You Rather? မှုံမှ...
ဘူတွေလဲ ? ဘာတွေလဲ ? @ အချစ်တက္ကသိုလ်
Myanmar Model - Khun Sint Nay Chi
Photos: Myanmar Designer's M DG Fashion Phenome...
Photos: Myanmar Designer Group Fashion Phenomen...
Photos: Wyne Su Khine Thein's Second Solo Album...